बाइड बडी किनिएका हुन् कि भाडामा ? सरकार सँग छैन कागजी प्रमाण « Today Khabar
बाइड बडी किनिएका हुन् कि भाडामा ? सरकार सँग छैन कागजी प्रमाण
प्रकाशित ३ मंसिर २०७५, सोमबार ०८:५१
काठमाडौं, ३ मंसिर । नेपाल एयरलाइन्सको पहिलो वाइड बडी विमान आएको ५ महिना भयो। दोस्रो– ४ महिना। पर्यटनमन्त्री स्वयं अझै दोधारमा छन्– यी किनिएका हुन् कि भाडामा ! प्रमाण मागेर तुरुन्त हेर्न सक्ने मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी बरु ‘ब्रह्म’ ले अनुमान गर्छन्, ‘भाडामा त नहुनु पर्ने हो !’ उनले आफूसँग किनेको ठोस प्रमाण भने नभएको प्रस्ट पारे। एपी वान टेलिभिजनको ‘तमसोमा ज्योतिर्गमय’ कार्यक्रमका लागि टीकाराम यात्रीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले प्रतिबद्धता जनाए, ‘म यसमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गराउँछु। साढे २ महिनाभित्र निचोड दिनेछु ।’ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
वाइड बडीको गडबडी प्रकरण यसअघि संसद्मा उठिसकेको छ। पर्यटनमन्त्री अधिकारीले आफू आएपछि वाइड बडी खरिदका नाममा कुनै भुक्तानी नपठाएको संसद्मा बताएका थिए। तर, उनी मन्त्री भएपछि मन्त्रालयकै स्वीकृतिमा २०७५ असार १० र १८ गते करिब ८–८ अर्ब रुपैयाँका दरले दुईपटक रकम पठाएको पाइएको छ।